Fiqi Bashiir Cabdulle oo Gaalkacyo lagu aasay -SAWIRO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Fiqi Bashiir Cabdulle oo Gaalkacyo lagu aasay -SAWIRO
Fiqi Bashiir Cabdulle oo Gaalkacyo lagu aasay -SAWIRO
Posted: HORSEED STAFF - July 15, 2017
Rabbi ha u naxariistee waxaa maanta lagu aasay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Fiqi Bashiir Cabdulle CUsmaan oo todobaadkii hore ku geeriyoodey dalka Sweden.
Aaska Fiqi Bashiir waxaaka qaybgalay Madaxweynaha Puntland ku xigeenkiisa iyo qaa rkmaid ah golaha xukuumadda, Xildhibaano, Isimo, iyo qaybaha kal duwan ee Bulshada.
Madaxweynaha Puntland oo ka hadley munaasabadii aaska ayaa yiri:
“….Waxaan rabaa anigoo ku hadlaya Magacayga kan Dawladda iyo kan shacabka Puntland-ba halkani inaan uga diro tacsi ummaada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland geeridaas kutimi Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan, illaahay ha’u naxariistee wuxuu ahaa shakhsi qiime weyn ugu fadhiya Soomaaliya, usoo shaqeeyey, wax badan usoo taray ayuu ahaa, inagana waajibka inaga saaran waxay tahay inaan u ducayno, Illahay u barrino inuu u naxariisto….” ayuu yiri Madaxweynaha Dawladda Puntland.
Fiqi Bashiir Cabdulle Cusmaan ayaa sanadkii 2015 lagu caleema saarey deegaanka Bacaadweyn, waxaana uu Isim u ahaa Beesha Reer Xirsi Faarax ee Cumar Maxamuud.
Bishii Janaayo 2013 ayaa Fiqi Bashiir Cabdulle Cimaan lagu caleema saarey deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug, waxaana uu Isim u ahaa Beesha reer Xirsi Farax ee Cumar Maxamuud.